Matongerwo eNyika, 06 Kukadzi 2019
Britain Yofunga Ruviri Pakutsigira Zimbabwe Kudzoka muCommonwealth
Hukama hweZimbabwe neBritain hunonzi hahuchina kumira zvakanaka zvichitevera kushandiswa kwechisimba nemauto munguva yekuratidzira kwakaitika mwedzi wapera, izvo zvakasiya vanhu vanodarika gumi nevashanu vaurayiwa, vakawanda vakuvadzwa, uye mazana asungwa.
Mutungamiri weAmerica, VaTrump, Vokurudzira Kubatana kweVanhu veNyika Yavo
VaDonald Trump vatura mashoko kunyika yavo epiri vave mutungamiri wenyika, kana kuti 2nd State of The Union, vari pamberi penhengo dzematare eseneti neparamende yepasi muWashington DC, vachiti vachikurudzira kubatana nekushanda pamwe kwemapato ezvematongerwo enyika.
Sangano reCitizens Forum Rokurudzira Kuomeserwa kweVanotengesa Nyika
Vachitaura nevatori venhau, mukuru musangano iri, VaAlex Gakanje, vati masangano aya akapesvedzera mhirizhonga, uye vachaavharisa.
Kuramwa Mabasa kweVarairidzi Kwotambirwa Zvakasiyana Siyana muBulawayo
Varairidzi muBulawayo vatambira zvakasiyana siyana kurudziro yekuti varamwe mabasa vamwe mune zvimwe zvikoro vachienda kubasa semazuva ose ukuwo vamwe vange vari pabasa asi vasingadzidzise.
Britain Yoyambira Kutemera Zvirango Vamwe Vanhu muZimbabwe.
Hurumende yeBritain inoti ichawedzera mazita ezvimwe zvizvarwa zve Zimbabwe pavanhu vakatemerwa zvirango zvichitevera zvakaitwa nehurumende ye Zimbabwe mushure mekuratidzira kwakaitwa nevanhu masvondo maviri apfuura.